Guddiga joogtada ah ee Golaha shacabka oo ku baaqay talaabo deg-deg ah oo loogu gurmanayo dadka fatahaadahu ay saameeyen – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa 29-kii bisha shir guddoomiyay kulanka Guddiga joogtada ah ee Golaha oo looga hadlay qorshe u sameynta sidii loogu gurman lahaa dadka ay dhibaatada kasoo gaartay fatahaada wabiga Shabeelle uu ka geystay gobolka Hiiraan iyo daadadka ku rogmaday Degmada Berdaale ee Gobolka Baay.
Kulanka oo ay sidoo kale ay joogeen Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey iyo Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad, waxa ay xubnaha Guddiga joogtada ah ay aad uga doodeen sidii dadkaasi gargaar deg deg ah loo gaarsiin lahaa maadaama ay tahay arin u baahan in si deg deg ah wax looga qabto.
“Kullanka waxaa xoogga lagu saaray sidii gar-gaar loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan. Dhibaatadda ugu weyn waxaa ay tahay in garoomada diyaaradaha aan la isticmaali Karin”, ayuu yiri xoghayaha golaha shacabka Cabdikariim Buux.
Intii kullanka uu socday waxaa la xusay in gar-garkii loogu talagahay abaaraha iyo fatahaada ee yaalla qeybaha kala duwan ee dalka in sida loo gaarsiin karo loo gaarsiiyo dadka dhibaateysan.
Fatahaadaha waxaa ay saameyeen 70km oo isku-wareeg ah oo dadkii iyo duunyidiin oo dhan ay saameysay.
Ugu dambeyn waxaa la isku raacay in si deg deg loo qaado talaabo loogu guramanaayo dadkaasi dhibaatadu heysato.